Juventus oo guul muhiim aheyd ka gaaraty Kooxda AC Milan +Sawiro – Gool FM
( Serie A) 6 Abriil 2019 Kooxda Juventus oo guul soo laabsho leh ka gaartay Kooxda Ac Milan kaddib ciyaar ku dhamaatay 2-1 oo ka tirsaneed horyaalka dalka Italy .
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ku dhamaaday 1-0 waxaba oo ay ku hogaamineyso Kooxda AC Milan oo marti aheyd wallow kooxda Juventus aya soo bandhigtay qaab ciyareed aad u qurux badan.
Kooxda AC Milan ayaa sameesay shan shuut balse mid qura ayaa abaaray goolka kooxda Juventus waana goolka ay helaan qeebtii hore ee ciyaarta kaas oo uu dhaliyeye laacibkooda Krzysztof Piatek kaddib caawin uu ka helay xidiga khadka dhexe ee reer Farance Tiemoue Bakayoko daqiiqadii 39-aad ee ciyaarta .
Dhaica kale Kooxda Juventus ayaa heshay sedex shuut dhamaan waxa abaareen shabqa kooxda Milan balse midna ma nqoon gool waxaa xusid mudan in isku dayadaas ay sameyeen uu ugu halis sanaa kubad qalmo rogod aheyd oo uu laaday xidiga lagu magacaabo Mario Mandzukic .
Ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku dhamaaday 1-0 oo ay ku hogaamineyso Kooxda AC Milan , waqti nasiini kaddib waxaa dib loo anaba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid xiiso badan .
Kooxda Juventus ayaa ku soo gashay dar dar xoogan qeebtii dambe ee ciyaarta iyaga oona ugu dambeen helay goolka bareejada ee ciyaarta oo aheyd mid rikooro ah , gool kulaada loo dhigay waxaa gool u badalay Paulo Dybala daqiiqadii 60-aad ee ciyaarta . natiijada ciyaarta ayaana isku badashay 1-1 .
Juventus ayaa sii laba jibaartay dadaalkii ay ku dooneysay in ay helaan gool kale waxa ayna ugu dambeen heleen goolka labaad ee ciyaarta waxaana goolkaas u dhaliyey da’yarkooda Moise Kean oo ciyaarta badal ku soo galay .
Ugu dambeen kulan ciayareedkii xiisaha badnaa ayaa ku dhamaaday 2-1 oo guushu ay ku raacday kooxda Juventus oo sameesay soo laabsho qurux badan .
Kooxda Real Madrid oo guul soo laabsho leh ka gaartay Kooxda Eibar +Sawiro